Mividiana sy mivarotra Maggot BSF sy ny fomba hividianana entana • Yurie BSF
Mividy sy mivarotra Maggot BSF & Ahoana ny fomba hivarotana azy
BSF Maggot Sale sy Maggot Marketing Method - Biraon'ny varotra BSF na mividy BSF maggot izay molekla na maggot ho an'ny indoneziana sasany dia zavatra tsy mahazatra. Raha any ivelany any, dia efa niasa am-polony taona maro ity orinasa ity. Inona no tokony hotandremana rehefa mividy masom-bozaka BSF ny kalitaon'ny mpamboly, tsy maintsy mijery sy mijery izy ireo alohan'ny hividianana maggot BSF.
Ho an'ireo izay tsy mahafantatra sy mahafantatra ny fomba fambolena ny fambolena Maggot amin'izao fotoana izao tsy misy fofona, ao an-tsainy ry zareo dia mbola maloto, maloto ary mahia. Tsy lazaina intsony ny fahatongavan'ireo lalitra maitso an-jatony izay mitondra loharanon'ny aretina.
Noho izany dia mila mianatra ny fambolena mahitsy ianao, ka ny lalitra mainty hoditra na ny BSF dia ao amin'ny toeram-pambolinao. Ny vokatra dia madio, tsy mahatsiaro tena ary amin'ny vidiny mirary ambony.
Mpiady avy amin'ny Black Soldier
Ny malaza dia manana tombony marobe toy ny trondro, biby fiompy, biby mandady, ny tontolo medikaly, polisy ary ny sisa.
Ny orinasa Maggot raha toa ianao ka mahatsapa fa mihazakazaka izany dia manana fahafaha-mividy goavana, ho an'ny tsena nichea toy ny biby fiompy biby, ireo tarehimarika dia mahavariana, jereo fotsiny ireo orinasam-pampandrosoana am-polony nasionaly natsangana tany Indonezia.
Maro ireo orinasa mpamatsy sakafo no marika fa tena mahasoa ny fandraharahana ny biby fiompy. Raha liana amin'ny fanombohana ity raharaham-barotra ity ianao dia tokony ho fantatra aloha ny fandalinana ny orinasa.
Ao amin'ny fanadihadiana, mazava ho azy, dia ahitana ny vidin'ny masomboly, ny varotra, ny karazan-tsakafo, ny haino aman-jery momba ny kolontsaina. Ny zava-dehibe indrindra amin'ity orinasa ity dia ny tsy tokony hisakafo sy hahazoana tombony, ny media dia tsy maintsy avy amin'ny fako voajanahary, diky biby na fako.
Ho an'ny famaritana antsipirihany ny fanadihadiana momba ny fambolena maggot avy amin'ny ambaratonga voalohany ho an'ny fambolena majgot dia azo hianarana eto> Fanadihadiana ny Business Cultivation Maggot
Nahoana no tokony hanitraitra ny fambolena fary? Satria raha manasa lalitra maitso ny fofona dia ho lasa trigger izay asehon'ny fianakaviana sy ny manodidina azy.
Ny fomba fambolena fanafody mamela-pofona dia manome anao SAFE sy COMFORTABLE, Safe, satria tsy hampiseho amin'ny fianakaviana sy ny fampiononana ianao satria ny orinasanao dia afaka maharitra mandrakizay.
Fomba fijery momba ny fambolena fambolena
Maro ny tombontsoa azo amin'ny fambolena vary, ny iray amin'izany dia ny fitantanana dia mora ary ny iray dia adiny roa isan'andro.
Noho izany ny fiandohan'ny orinasa dia azonao atao izany ho toy ny orinasa mpitrandraka voalohany na ho an'ny fambolena madinika. Azo atao ny fandrosoana taorian'izay. Azonao atao ny manokatra ny soso-kevitra hividianana ny fandaniana ilaina fanadihadiana momba ny varotra maggot.
Ny renivohitra nilaina tamin'ny famokarana madinika dia kely dia kely, satria ny fitaovana ho an'ity fambolena ity dia afaka mampiasa ireo zavatra ilaina ao an-trano. Ho an'ny asa isan'andro na ny vidin'ny fampahalalam-baovao amin'ny kolontsaina dia tena mora ihany koa na dia maimaim-poana aza.
Nahoana no mora sy maimaim-poana? satria ny ingredients dia mampiasa ny fako organika, ny diky biby ary ny fako izay avo indrindra amin'ny tontolo iainantsika.
Ny sakafo mahavelona ao amin'ny maggot dia tena feno ary ny votoatin'ny proteinina koa dia avo lenta, mba hahafahana mampiasa azy io ho biby fiompy hafa sy sakafo voajanahary ho an'ny karazan-trondro sy ny zava-maniry rehetra.
Miankina amin'ny kalitaovana hividianana ary inona no antony? Raha misy siramamy na sakafom-biby hafa ahitana vovobony eo anelanelan'ny Rp5.000 - Rp9.000 / kg.
Raha ny voa eo anelanelan'ny Rp10.000 - Rp500.000 / kg, arakaraka ny kalitaony. Ny fahasamihafana dia ny lamin'ny fikarakarana. Ny fomba hahafantarana ny hatsarana tsara dia mety ho tonga ary hahita ny fomba fitondrana azy mivantana.
Na amin'ny fangatahana ny mpivarotra ny fomba hikarakarana ireo voa. Raha nomena fako ihany ny lamin'ny fikarakarana, dia tsy mitovy ny kalitaony. Ny tsara toy izany dia tsara ho an'ny trondro sy ny sakafom-biby. Tsy azo ampiasaina amin'ny voa.
Misafidiana ireo mpamboly manana traikefa ary maro no mandray ny toro-hevitra LIVE, fa tsy lahatsoratra fotsiny na fijoroana vavolombelona voasoratra. Misafidiana tsara ny masomboly ambonimbony kokoa amin'ny fahombiazan'ny fambolena maggot.
Ny tarehimarika matetika dia mitovy amin'ny kalitao, ny lafo kokoa ny tsara kokoa ny kalitaony. Nefa jereo ihany koa ny mpamboly aloha!
Ahoana ny fomba fikarakarana BSF Magical
Zava-dehibe ho an'ireo izay maniry ny hanomboka ity orinasa ity, mba hianatra aloha ny fomba hivarotana ny vokatra amin'ny lantom-pita ao aoriana. Ka rehefa manomboka dia tena faran'izay betsaka.
Ny fambolena BSF dia afaka mivarotra amin'ireto fomba manaraka ireto: * Tsidiho avy hatrany ny Tantsaha, Poultry, Reptiles and Hobbies. Fomba iray mahomby ho anao ny mandeha mivantana ary manolotra tantsaha any amin'ny tontolo manodidina. Mitadiava fomba mahasoa sy fiaraha-miasa.
Ohatra: Manasa ny fiaraha-miasa amin'ireo tantsaha izay efa manana tany ary manana traikefa mitazona trondro, fa ny fanomezana enti-manana kosa dia manome. Amporisihina ny hanaovana fifanarahana an-tsoratra ity fifanarahana fiaraha-miasa ity.
Dia ahoana raha tsy misy tantsaha na mpamboly saka manodidina anao? Raha toa ka tsy misy ny akaiky indrindra dia azonao atao ny mividy azy amin'ny fampiasana fitaovana media sosialy toy ny Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube na manao tranokala maimaim-poana.
Mampirisika ny raharaham-barotrao.
Mijoroana tsy tapaka amin'ny haino aman-jery sosialy samihafa, aza adino ny hifanaraka amin'ny vondrona izay manana fifandraisana amin'ny trondro sy ny sakafom-biby. Ho an'ny Facebook dia tokony hampiasa kaonty manokana ianao, mamorona pejin-kaonty na pejy.
Fampandrosoana amin'ny kaonty Twitter
Afaka mampiasa ny fampahalalam-baovao sosialy izahay mba hampiroboroboana ny orinasanay. Fa tsara kokoa, indrindra ho an'ny fampiroboroboana ao amin'ny Twitter, manomana ny tranokala maimaim-poana aloha. Raha misy lahatsoratra vaovao nozaraina avy amin'ny tranonkala izay noforoninay.
Fanampiana amin'ny kaonty Instagram
Ao amin'ny med SOS, io dia malaza amin'ny taham-pikatrehana avo lenta raha ampitahaina amin'ny kaonty Facebook, angamba satria amin'ny olona ao amin'ny Facebook dia mampiasa azy io ho toy ny fitaovana ho an'ny fifandraisana ara-tsosialy, fa amin'ny Instagram kosa dia mifantoka kokoa amin'ny fandraharahana.
Ity fomba fiasa ity, na dia "sarotra" aza nefa ny fanananay, fa ny valiny maharitra dia tena tsara, ankoatra izany koa ho fitaovana hampitomboana ny fatokisana ny mpanjifa mety ho an'ny orinasa mihazakazaka.
Raha tsara vintana ianao, miaraka amin'ity tranonkalan'ny fampahalalam-baovao ity dia afaka manintona mpanjifa maoderina avy any ampitan-dranomasina, mazava loatra fa matetika izy ireo mandidy vola be ary ny vidiny dia mety tsara kokoa noho ny tsena eo an-toerana.
Ny fametrahana tranonkala iray dia mora sy sarobidy, na dia mampiasa tranonkala avy ao amin'ny Google aza ianao, toy ny blogspot sy ny Google dia ny orinasako, ny roa dia 100% maimaim-poana. Ohatra momba ny fampiroboroboana maimaimpoana ao amin'ny google blogspot
Fampiroboroboana amin'ny fanaovana tranokala an-tserasera
Maro ireo tolotra izay manolotra ny fivarotana an-tserasera amin'ny mora indrindra ho an'ireo izay tena mendrika. Mifidy araka ny teti-bolao ianao. Ny fomba fanao dia amin'ny karazana google "online shop making services"
Misafidiana tsara, ny sasany amin'izy ireo dia tsara, ny sasany dia tokony hitandrina ihany koa. Mangataha ary manontania be dia be, mangataha soso-kevitra momba ny dingana tokony hiomananao. Aza misafidy asa izay tsy azon'izy ireo manome ny toro-hevitra tsara indrindra ho an'ny magazay an-tserasera izay hiasa ho antsika.
Azonao atao ny mampiasa tranokala toy ny OLX, Tokopedia, ary ny hafa. Fanofanana fiofanana ho an'ny orinasam-pambolena maggot. Mba hahafahan'ny orinasa madinika haniry haingana, ny tetikadinay dia tsy maintsy mamorona sy miavaka ihany koa, ny iray amin'izany dia ny hanokatra sampandraharaha fanofanana fiompiana maimaimpoana, maninona no tanjona lehibe io tetikady io ???
Mba hampidirana ny vahoaka amin'ny ankapobeny fa ianao dia iray amin'ireo orinasa mpamboly vargot. Amin'ny fampiofanana ity orinasa ity dia hampivelatra haingana ny orinasanao na ao an-tanàna na ivelan'ny tanàna.
Hiantefa haingana kokoa ny raharaham-barotrao satria manampy ireo izay nahazo fiofanana ara-barotra. Ny fampiroboroboana ny orinasan'ny vava dia tena mahomby raha oharina amin'ny fampiroboroboana amin'ny alalan'ny media.
Tsara ho an'ny hafa. Aza manahy raha mbola manohy maniry ny hanatontosa orinasam-pambolena Maggot ireo izay nomaninao. Angamba na dia ireo mpampiofana aza dia ho lasa mpiara-miasa aminao indray andro any. Mbola betsaka ny tanjon'ity orinasa ity raha oharina amin'ny filàna mihamitombo hatrany sy ny famatsiana voafetra.
Ny fampiofanana momba ny orinasa dia tany am-piandohana ihany no natao ho an'ny tanjona ara-tsosialy, saingy mety ho lasa fanohanana na fampiofanana ara-barotra / tetikasa eo amin'ny sehatry ny fambolena maggot.
Ny fanokafana ny fiofanana ho an'ny orinasam-pambolena Maggot dia tsy mitaky vola fanampiny, satria amin'ny fiomanana dia efa vonona sy mavitrika toy ny mahazatra ianao. Hazavaina fotsiny ny lalana sy ny fomba mety, inona no tokony hatao hatramin'ny manomboka hatramin'ny farany.
Amidio ny voankazo Maggot
Fomba hifidianana Superior & Healthy BSG Maggot Seeds. Rehefa mifidy voan-javamaniry ho an'ny fambolena na fambolena ianao dia tokony mifidy masomboly izay ambony sy salama.
Izany dia noho ny voamaina ambony dia hamokatra marary / maggots BSF. Amin'ny famaritana azy, ny ambony ambony dia miaramila miaramila mainty manidina izay manana toetra ambony kokoa, izay afaka maneho ny toetra amam-panahin 'ny ray aman-dreny ary manana votoatin-tsakafo avo lenta mba hananan'izy ireo lanja ara-toekarena ambony ary tsy marary.
Azo jerena amin'ny fangatahana ny tantsaha ny fomba hikarakarana sy ny karazana sakafo omena ny voany mandritra ny fikarakarana azy ireo hatramin'ny fahazazany ka lasa ny voan'ny BSF.
Ny BSF Maggot dia tahaka ny biby hafa rehetra izay tsy maintsy misakafo tsara mandritra ny fotoana fikojakojana. Ampio ny nutrigot amin'ny fanombohan'ny fampiomanana amin'ny media izay manentana ny BSF hanambady sy hanatody.
Tombontsoa avy amin'ny voa tsara
Famokarana avo ary tsy mora novonoina
Mihodina haingana mankany amin'ny olon-dehibe BSF / BSF
Toetry ny taha ambany indrindra amin'ny larva
Ny haavon'ny karazan-tsakafo BSF dia avo dia avo eo anelanelan'ny 500 ka hatramin'ny 900 ny rambony maggot isaky ny atody iray
Manana lavaka lehibe na lehibe lehibe
Manohitra ny bibikely sy ny aretina, indrindra mandritra ny faran'ny zaza tsy ampy herinandro
Ny karazana ambony amin'ny voan'ny BSF araka ny etsy ambony dia azo hajaina raha toa ka mihanaka ny voan'ny BSF.
Amin'ny fahamendrehana rehefa mividy BSF voa izay tsara dia hamokatra larva / maggot maivana mandritra ny taona, ny tena zava-dehibe dia ny mihaza haingana 18 isan'andro mihoatra noho ny amin'ny ankapobeny 30 isan'andro
Ny voa ambonimbony koa dia manohitra ny fepetra amin'ny tontolo iainana tafahoatra, indrindra indrindra rehefa voatsikera vao haingana hatramin'ny herintaona sy tapany, izay mora ampielezana noho ny tahan'ny tsy fahampian-tsakafo, ny fivoarana haingana ary ny famakafakana ny kolontsain'ny teknolojia.
Raha toa ka ny 85% farafahakeliny dia manatanteraka ny toetra ambony indrindra amin'ny lisitra etsy ambony, ny miaramila miloko miondrika dia sokajina ho ambony. Raha tsy mahafeno ny fepetra 85% izy etsy ambony, dia voaisa araka ny tokony ho izy ny voan'ny BSF.
Zavaboary ambony: fanamafisana lehibe 2cm
Ny hatevin'ny hena: matevina
Hetsika: hetsika mavitrika
Loko voa: mainty
Aroma: tsy fofona
ary ny hafa